China Idler / Front Idler mveliso kunye nabathengisi | Bonovo
Idler / Idler yangaphambili
Idlers sisikhokelo kunye neendlela zokuhlengahlengisa uxinzelelo lomkhondo kwiindibano zonxibelelwano. I-BONOVO idlers ichanekile ngomatshini emva koko inyangwa ngobushushu, ithanjisiwe kwaye itywinelwe ukubonelela ngobomi obuthembekileyo obude.
Umgangatho ophezulu we-idler wangaphambili unokunciphisa uxinzelelo kunye nokunciphisa umthwalo wokuthwala ukwandisa ixesha lokuphila.
Izinto eziphathekayo 40SiMnTi
Imibala Mnyama okanye tyheli
Inkqubo Nasekuqiniseni eyahlulayo D85ESS-2 ldler
Ukuqina komphezulu Ububanzi be-HRC48-54: 4mm-10mm
Izibonelelo zokusebenzisa ii-idlers ezikumgangatho ophezulu: inkqubo ekhethekileyo yokunyanga ubushushu ikhokelela kubomi obude, elona nqanaba likhulu lovavanyo lokugcwala umthwalo linokuthintela ukwahlukana, okugcina konke ukugcina iindleko zokugcina.
Imizobo yoKwakha / yoKwakha
Khetha imodeli yakho: samkela zombini iodolo eninzi kunye neodolo yabasebenzisi bokugqibela
Iphakheji kunye nokuhambisa: sinendawo yokugcina izinto engama-7000m2, sigcina izinto ezaneleyo zokuhambisa ngokukhawuleza, nceda unxibelelane nentengiso yethu yokuhanjiswa kwe-odolo kwangoko.
UKUYALELWA NGOKUKHAWULEZA NOKUSEBENZA KAKUHLE
Nokuba ufuna imixokelelwane, izileyi, izileli okanye iziporoli, uku-odola la malungu kuyakhawuleza kwaye kuyasebenza ngoncedo lomphathi wakho wentengiso. Sinexabiso lokukhuphisana ngokuthe ngqo kumzi-mveliso kuzo zombini iikontraki, abathengisi kunye nabasebenzisi boomatshini, uninzi lwezinto ezingaphantsi kwenqwelomoya ziya kuthunyelwa ngokukhawuleza kwiindawo zethu zokugcina ezingama-7000m2.
Egqithileyo Umqhubi wenethiwekhi
Okulandelayo: I-Sprocket / Icandelo
Ikati 277c iinxalenye zokuhamba ngaphantsi
Amalungu ahamba ngaphantsi kwesithuthi
amacandelo umkhondo excavator
indibano engasebenziyo ngaphambili
iindawo ezincinci zokuhamba ngaphantsi
umkhondo iinxalenye zokungasebenzi
I-BONOVO Iinqwelo ezihamba ngaphantsi kweTracker Track Fron ...